Tabilao HDI PCI 10 layer China Manufacturer
Description:10 Lavan'ny maty nolavina,10 Layer Blind PCB,PCB10 10 Layer HD Layer
Home > Products > HDI PCB > Tabilao HDI PCI 10 layer
HDI PCBs dia mampiasa fitaovana manjelanjelatra avo lenta, ary manana tsipika varahina tsara sy mikrôkiazy. Na dia misy aza ny fomba samihafa, misy ny voaroy, ny sasany tsy mampiasa, na inona na inona teknolojia antsoina hoe Every Layer Interconnect (ELIC), izay mamokatra PCB mora vinavinaina ary misy fiasa mahery vaika isaky ny faritry ny faritra. Ny Storm Circuit HDI PCB dia mampiasa rindran-tsavoka maro vita amin'ny vovoka vita amin'ny varahina izay ahafahan'ny fifandraisana mifandraika be.
7.Mini sakany / habaka: 0.15mm / 0.12mm
Na inona na inona ilainao FR4 mahazatra, TG ambony, board Aluminum, board RF miaraka amin'ny Er, PTFE, board brass.large mavesatra, birao avo lenta miaraka amin'ny vias.impedence control boards.Ka afaka manolotra vokatra toy izany haingana tahaka ny ananantsika fitaovana maro samy hafa ao anaty tahiry.
Manana singa maro eto an-trano isika, izany no hamonjy fotoana sy ny vidiny amin'ny totalinao.E-nao indrindra ho an'ny mpanohitra, capacitor.
10 Lavan'ny maty nolavina 10 Layer Blind PCB PCB10 10 Layer HD Layer PCB avoakan'ny frezy avo lenta Via ao amin'ny Pad Blind 10 Layer PCB miaraka amin'ny 6 Andro Via amin'ny Pad Price 2 PC Layer matevina